Tantely - Fitsaboana tantely - Fitsapana tantely - BALLYA
Erythromycine dia antibiotika alkaline nalaina avy amin'ny vahaolana ara-kolontsainan'ny Streptomyces erythropolis
Sulfonamide dia kristaly granular na vovoka, tsy misy fofona ary mangidy kely.
Kanamycin dia inhibitor biosynthesis proteinina.
Clarithromycin dia derivative ny erythromycin.
Quinolone dia kilasin'ny zava-mahadomelina miady amin'ny bakteria sentetika.
Chloramphenicol dia toy ny kristaly fotsy na tsy misy fanjaitra na flaky kristaly.
Tetracycline no fitambarana fototra indrindra ao amin'ny fianakavian'ny antibiotika tetracycline.
Tylosin dia antibiotika macrolide.
Neomycin dia antibiotika novokarin'i Streptomyces freundii.
Fanafody tantely amin'ny tantely
Inona ny fanafody tantely？
Ny fanafody tantely dia manondro ireo fanafody ampiasaina amin'ny fiompiana tantely sy famonoana otrikaretina tantely. Tao anatin'izay taona faramparany, ny fanafody tantely dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fifehezana ny fahasimban'ny aretina tantely, miantoka ny fampandrosoana ara-pahasalamana ny tantely, ary ny fanatsarana ny vokatra sy ny kalitaon'ny vokatra tantely.
Raha ny tanjona kendrena ataon'ny tantely, dia azo zaraina ho karazany 7 ireo fanafody tantely efa misy:
1. Fanafody antivirus, ireo fanafody ireo dia matetika manakana ny fielezan'ny viriosy ao amin'ny sela ao amin'ny vatan'ny tantely na handrava ny synthesis niokleary sy ny proteinina ao amin'ny virus.
2. Fanafody miady amin'ny bakteria, indrindra sulfonamides ary antibiotika, ampiasaina hanakanana sy hifehezana ireo aretina mikraoba ary hanakana ny fielezan'ny bakteria.
3. Fanafody antifungal, ampiasaina hamonoana na hanakanana ny fitomboana sy ny fiterahana ny hyphae na spore.
4. Ny fanafody antibiotika dia ampiasaina hifehezana ny spore sy ny amebiasis.
5. Ny acaricides dia mamono ireo bitika tantely amin'ny alàlan'ny fifandraisana, ny fumigation ary ny fumigation.
6. Fanafody famonoana otrikaretina, ampiasaina amin'ny famonoana otrikaina ny tadim-borona, fitaovana tantely ary tokotanin'ny tantely.
7. Ho an'ny fanafody famonoana detoxification, voapoizin'ny pestiside na poizina hafa ny tantely. Atropine sulfate sy phosphate detoxification dia matetika ampiasaina.
Ny sisa tavela amin'ny fanafody tantely
Fa maninona no misy residu fanafody tantely ao amin'ny tantely？
Ny olona manan-danja amin'ny indostrian'ny vokatra tantely dia nanipika fa ny fisian'ny residu zava-mahadomelina amin'ny tantely dia mety tsy nateraka nandritra ny fanodinana, fa niseho tamin'ny loharanon'ny famokarana.
Ny fanafody veterinera chloramphenicol sisa tavela amin'ny tantely avy amin'ny loharanon'ny famokarana. Ny antony dia mandritra ny famokarana tantely, ny zanaky ny tantely dia mora tohina amin'ny aretina, ka miteraka fatiantoka ara-toekarena lehibe ho an'ireo mpiompy tantely, ary ny fanafody sasany amin'ny veterinera dia mora sy mahomby, koa misy ireo toeram-piompiana dia tsy miasa mafy amin'ny lafiny hafa, miankina indrindra amin'ny ny fampiasana antibiotika marobe sy zava-mahadomelina ho fisorohana ny aretina, io fanazaran-tena io dia mitarika amin'ny fanamafisana ny residu ny fanafody veterinary amin'ny vokatra tantely.
Amin'ny dingan'ny famahanana tantely, mba hisorohana sy hikarakarana aretina tantely, dia hampiasa antibiotika toy ny chloramphenicol, tetracycline, oxytetracycline, ciprofloxacin, norfloxacin. Tsy hisy residu rongony.
Amin'ny famokarana tena izy, ny fiompiana tantely malemy sy ny zanaky ny tantely izay tsy mahazaka aretina dia mora voan'ny aretina. Amin'izany fomba izany, ny fanafody dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso, ary ny sisa tavela amin'ny zava-mahadomelina dia azo antoka fa ho entina tantely.
Ahoana no hisorohana ny sisa tavela amin'ny tantely amin'ny tantely?
1. Mamboly sy mitazona zanatany tantely matanjaka. Ny zanatany tantely matanjaka no fototry ny vokatra avo lenta amin'ny vokatra tantely. Ny zanatany tantely matanjaka dia manana fanoherana mahery vaika ary afaka manasitrana ny tenany na dia voan'ny aretina tantely sasany aza.
2. Ampiasao ny tombony azo amin'ny hybridization mba hamboly karazan-tantely mahatohitra aretina.
3. Misy loharano vovo-tantely tsara. Ny loharanon'ny vovo-tantely dia ny fepetra fototra amin'ny famokarana tantely sy ny fototry ny famokarana vokatra tantely. Rehefa tsy misy ny loharanon'ny vovo-tantely any amin'ny tontolo ivelany, ny zanaky ny tantely dia tokony homena vovoka tantely amin'ny fotoana mety mba hahazoana antoka fa tena ilaina ny sakafo ao amin'ny tantely.
4. Mifandraisa amin'ny fifandraisan-davitra amin'ny fifandraisan'ny tantely sy ny spleen. Mandritra ny vanim-potoanan'ny fiompiana tantely, indrindra amin'ny fiandohan'ny lohataona, dia tokony betsaka ny tantely noho ny spleens.
5. Rehefa apetraka amin'ny faritra karankaina ny tantely dia tokony omena rano ara-potoana izy ireo ary ampiana mineraly. Ny rano dia ilaina amin'ny hetsika ataon'ny tantely sy fahavelomana. Any amin'ny faritra karankaina, ny rano madio dia tokony hanome sakafo ara-potoana rehefa tonga ny fiompiana tantely, ka ny refiny dia mamolavola reflex ary tsy hivory maloto.
6. Mamokatra tantely matotra mba hampihenana ny tsimok'aretina eo amin'ny zanatanin'ny tantely. Ny famokarana tantely matotra dia tsy manome antoka fa ny zanaky ny tantely dia manana sakafo ampy, fa mampihena ihany koa ny valan'aretina mikraoba eo anelanelan'ny zanaky ny tantely noho ny fihenan'ny isan'ny fanetsiketsehana ny tantely.
7. Esory ny spleen taloha ary mamorona spleen vaovao bebe kokoa. Ny taolam-borona dia toeram-piterahana ho an'ny tantely sy trano fitehirizam-bokatra fitehirizana vovoka tantely. Ny fanandramana ara-tsiansa dia manaporofo fa ny felam-borona dia ny mitondra ny loharanon'ny aretina ary ny mitondra ny vokatra tantely voaloton'ny reside fanafody tantely. Ny fanafoanana ny spleen taloha sy ny famoronana spleen vaovao ara-potoana dia tsy vitan'ny fampihenana ny aretina pathogenika, fa koa ny famongorana ireo reside fanafody tantely sy ny loto amin'ny vokatra tantely.
8. Famonoana otrikaina amin'ny fitandremana.
9. Fisorohana ny fandotoana ivelany.
10. Fisorohana sy fitsaboana ireo aretina tantely amin'ny alalàn'ny fifehezana biolojika sy fifehezana zava-mahadomelina.
Mety ho lasa ratsy ve ny tantely
Tantely voajanahary azo tehirizina mandritra ny fotoana maharitra tsy misy fahasimbana amin'ny fanjakana voaisy tombo-kase amin'ny tontolo voajanahary. Na izany aza, ny tantely dia tena hygroscopic ary misy anzima miasa masirasira sy masirasira. Raha tsy ampy tsara ny tombo-kase dia mora masiaka sy mihasimba ny tantely.
Fantaro raha lasa ratsy ny tantely
Azonao atao ny mamantatra azy mivantana sy manandrana ilay tantely eny an-tananao. Raha mihinana azy eo am-bavanao dia masiaka, izay manaporofo fa niharatsy izany. Ny tantely tsara dia tokony ho mamy ao am-bava. Aorian'ny fisakafoanana dia hahatsapa ho marikivy amin'ny vava sy ny tenda ianao.
Ny famokarana tantely marika dia misy ny fomba famokarana tena henjana. Voalohany indrindra, ny fiompiana tantely dia vokarina eo ambany fifehezana henjana ny rafitra indostrian'ny tantely tantely. Ny fisorohana ny aretin-tantely dia vita 45 andro mialoha ny fotoana fanangonana, ary ny fampiasana zava-mahadomelina dia foanana mandritra ny fotoam-pamokarana.
Tantely manta dia angonina ary atokan'ny mpikotroka tantely vy 304, ary fonosina amin'ny barika plastika isa ho an'ny fitaterana. Rehefa tonga ao amin'ny orinasa ilay tantely manta dia handalo fizahana efatra izy:
1. Alefaso any amin'ny efitrano fanaraha-maso ny santionany mifangaro isaky ny barika tantely isaky ny fizahana;
2. Ny santionany santionany dia alefa any amin'ny foibem-panadinana ho an'ny minisiteran'ny Fambolena sy fiompiana tantely;
3. Potsero ao anaty fitoeram-panafangaro ny tantely manta ary afangaro tsara alohan'ny handefasana azy any amin'ny efitrano fanaraha-mason'ny orinasa hanaovana fizahana indray;
4. Atolory ny foibem-panadihadiana momba ny vokatra tantely ao amin'ny minisiteran'ny Fambolena indray ny fizahana.
Aorian'ny fizahana fizahana efatra hentitra vao azo idirana ny fizotry ny filtration sy ny canning.
Ny tester tantely dia manana fantsom-pahitana maro, izay afaka manandrana santionany maro amin'ny fotoana iray, ary ny santionany tsirairay dia miasa tsy miankina amin'ny fifehezana ny programa nefa tsy mifanelingelina.
Na izany aza, satria somary lafo ny tester tantely dia mitaky fandidiana feno tokoa izy io ary mety amin'ny fiompiana tantely lehibe manana talenta teknolojia avo lenta.
Kitapo fitsapana tantely
Ny tantely tantely tantanin'ny tena manokana dia sarotra ny manara-maso azy noho ny habeny sy ny teknika ambany ao aminy. Ny kitapo fitiliana tantely nomen'i BALLYA afaka mamaha ny ahiahin'ireo mpiompy tantely. Ny kitapom-panadinana tantely dia tsy vitan'ny miasa tsotra fotsiny, fa koa manana fotoana fohy sy marina tsara. Ny valin'ny fitsapana dia mifanaraka amin'ny fenitry ny EU ary safidy voalohany amin'ny fitsapana tantely amin'ny toeram-piompiana tantely kely sy salantsalany.